Banyere Anyị - Jinan Huifeng Aluminium Co., Ltd.
ọ nwere 3 mmepụta factory na a nkwonkwo ịmalite factory, mgbe afọ nke mmepe, na enterprise nwere electrolysis, nkedo-Rolling, oyi Rolling, na-ekpo ọkụ Rolling, profaịlụ na waya mmepụta akara, wdg
Oyi igwe akpọre igwe
Hot akpọrepu Line
"Jinan Huifeng aluminum Co., LTD". Bụ ọhụrụ guzobere aluminum nhazi mmepụta enterprise, restructured si ala-na-agba ọsọ enterprise, dị na China "bilie obodo" -PingYing asị nke Jinan obodo n'ókèala, na-ekpuchi ebe ihe karịrị 600 acres, nwere 1600 ọrụ, gụnyere ọkachamara technology pesonel 162 ndị mmadụ, ofu akụ 530 nde Yuan, o nwere 3 mmepụta factory na a nkwonkwo ịmalite factory, mgbe afọ nke mmepe, na enterprise nwere electrolysis, nkedo-Rolling, oyi Rolling, na-ekpo ọkụ Rolling, profaịlụ na waya mmepụta akara, wdg
Ngwongwo ihe eji emeputa ihe tinyere 1850 mm otu igwe na-eme ka okpukpu abuo na-agbanwe agbanwe, uzo ato nke 1850 mm ihe nkpuchi oyi, uzo abuo nke 1450 mm ihe nkpuchi oyi, otu uzo 2050 mm ihe nkpuchi oyi, uzo abuo nke nkedo 2100 mm -ịchịkwa igwe, usoro asatọ nke 1850 mm cast-Rolling Mill, 2100 mm na-efegharị efegharị efegharị igwe isii, 2050 mm na-agbazi usoro isii, igwe 660 ziri ezi na-egbutu igwe, 260 mita na-ekpuchi mkpuchi, akara 20 nke nhazi ọrụ efere akụrụngwa; Profaịlụ mmepụta akụrụngwa gụnyere 3600 tọn na 2800 tọn extruding igwe, 1350 tọn 1300 tọn na 880 tọn mmadụ abụọ na-eme extruding igwe, 800 tọn laa azu extruding igwe, 630 tọn 500 tọn extruding igwe, erughị ala ịgbatị igwe, 11 rollers straighter, tube ịbịaru igwe, mkpanaka ịbịaru igwe, 400 KW vetikal quench oku na isii tube Rolling na nkume igwe nri mmepụta edoghi; Ancillary akụrụngwa tinyere nitriding ọkụ, homogeneous ọkụ, na merela agadi oven, asatọ set nke márá ugboro itinye n'ọkwa ọkụ na ọxịdashọn ọdọ mmiri.
Anyị agafeela nyocha usoro nyocha nke ISO9001,2000, ma guzobe ụlọ nyocha ọkachamara na-arụ ọrụ, nke nwere onye nyocha dị iche iche, onye na-enyocha CNC tensile, na microscopy dị elu, ike nyocha, wdg, yana ndị ọrụ aka ọrụ anyị ruru eru ọnụ, iji hụ ngwaahịa ahụ mma zuru ezu izute ndị ahịa chọrọ.
Anyị isi ngwaahịa gụnyere: aluminum na aluminum alloy efere, ụkpụrụ aluminum efere, aluminum eriri igwe, agba ntekwasa aluminum eriri igwe, aluminum okirikiri, aluminum foil. Na profaịlụ aluminom anyị nwere ike ịmepụta aluminom, ogwe osisi aluminom, eriri tube na-enweghị ntụpọ, akụkụ aluminom, ọwa mmiri aluminom, slideway na profaịlụ ụlọ ọrụ, ihe extrusion nwere ike ịmepụta site na usoro 1000 ruo 7000, ụdị iwe niile. Companylọ ọrụ nwere ihe karịrị 200 ụdị ngwaahịa dị iche iche na-enweta aha "ngwaahịa dị elu" site na steeti, mpaghara ma ọ bụ ozi, ngwaahịa anyị na-ejikwa ya na mbara igwe, ebu, akụrụngwa, kemịkalụ, ihe owuwu, nkwakọ ngwaahịa, ntụ oyi, ike anyanwụ, ngwa nju oyi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ choro bu ihe anyi ji eme ihe. Ngwakọta ngwaahịa nwere ike ịnye anyị uru karịa Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd ga-esi ọnwụ na "inye kacha mma ngwaahịa na-eju afọ ahịa, ngwa ngwa omume na zuru ọrụ na-akwụghachi ụgwọ ahịa" wdg